FHI: sanadkii hore 294 dumar uur leh ah, ayaa jidka ama guriga ku dhalay. - NorSom News
FHI: sanadkii hore 294 dumar uur leh ah, ayaa jidka ama guriga ku dhalay.
Sida ay sheegtay laanta caafimaadka dadweynaha Norway ee FHI, sanadkii lasoo dhaafay 294 qof dumar ah oo uur lahaa, ayaa xiliga foosha ka gaari waayay isbitaalka, iyaga oo ku umulay intii ay jidka kusii jireen ama aysan guriga kasoo bixin.
Dhalmada noocan ku dhacdo ayaa Norway looga yaqaan, foosha aan la qorsheynin. Waxaana sanadkii tagay intii jidka lagu sii jiray dhexda ku dhashay 147 caruur ah, halka 121 ilmoodna ay ku dhasheen guriga kahor inta aan hooyooyinka la geynin qeybta umusha ee isbitaalka. Sidoo kale 26 qof ayaa ku dhashay meelo kale oo isbitaalka ka baxsan.
Gobolada Nordland Nordland, Troms iyo Finmark ayaa ugu badan ee dhalmada noocan ay ka dhacdo.
Xigasho/kilde: NESTEN 300 FØDENDE KVINNER RAKK IKKE FRAM TIL SYKEHUSET I FJOR
Previous articleSweden oo ogolaatay safarada gudaha ah ee dalkaas.
Next articleGabadhii aabaheed ay boolisku dileen oo 16 milyan loo qaaraamay.